uhlelo Republican okwamanje ifomu ethandwa kakhulu uhulumeni emhlabeni. Kukhona izinhlobo ezimbili eziyinhloko weRiphabhulikhi. Kulesi sihloko, bonke bazokholwa kubhekwe. Liphendula yombuzo nakho kuzonikezwa nalokho lihlukile ePhalamende republic kamongameli.
Yini mayelana republic ePhalamende laziwe?
Njengoba senza kucace igama ifomu okufakiwe, indima esemqoka ekuphatheni futhi ekwakheni kweluhlelo lwahulumende ngalokuyimphumelelo udlala ephalamende. EPhalamende, esikhundleni salokho, ekhetha kukaNdunankulu (uNdunankulu). Le nqubo ithatha indawo ngesisekelo amavoti iningi kusukela ezinye iqembu ePhalamende. Amandla esiphezulu ku-republic ePhalamende, ngaleyo ndlela, eliholwa undunankulu, hhayi umengameli.
Ngaphezu kwalokho, noma yimuphi republic ePhalamende enezinto eziningi izici ezibalulekile. Kuwufanele ukugqamisa:
amakhetho nguMongameli iningi ephalamende;
UMongameli, empeleni, ohlangothini: imisebenzi ngezikhathi ezithile kuphela representational eyabelwe yena;
Uhulumeni olawulwa wePalamende.
Ngaphambi sikhuluma umehluko phakathi republic kamongameli yiPhalamende, kubalulekile ukwaba amaqiniso ayisisekelo ngohlobo laMengameli uhulumeni.
Yini mayelana republic kamongameli laziwe?
Inhloko State (uMongameli) uthi nge kamongameli nokuphathwa style kubhekwa kakhulu futhi inhloko kahulumeni, okusho ngqongqotshe. He is ngokuphelele ezimele ephalamende imbala. umongameli ekhethwe okuthandwayo.
Izimpawu ifomu laMengameli uhulumeni ngendlela elandelayo:
UMongameli elakha uhulumeni;
umongameli angeke yakha iPhalamende;
umongameli unelungelo lokuthathwa njengomsulwa Veto izikweletu ePhalamende;
UMongameli uqondisa inqubomgomo angaphandle kanye ezifuywayo.
Ngiziphi iinarha ze ube nohlobo yasephalamende uhulumeni? Kuyaphawuleka ukuthi uthi nedivaysi okunjalo akukhona kangaka. Nokho, amafomu classical iningi kudivayisi ePhalamende ezilotshwe eJalimane, e-Austria, e-India, e-Italy, Greece namanye amazwe. Izibonelo republic kamongameli zibekelwe-United States, Belarus, Kazakhstan, eMexico nakwamanye amazwe amaningi.
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini Amalungu republic kamongameli? Kuyinto ukunikeza umehluko eziyisisekelo kakhulu futhi ezibalulekile:
republic ePhalamende kusho ukhetho umengameli yiningi ePhalamende, hhayi ngalokho okuthandwayo - njengasezinsukwini republic kamongameli;
inhloko isimo republic kamongameli has a amandla olukhudlwana futhi wenziwa endaweni ebanzi kuka ephalamende;
endaweni kamongameli republic kweNhloko Yombuso abakhethwe uNdunankulu kanye nabefundisi abahlukahlukene; ifomu yasephalamende uhulumeni, lezi zikhulu lazo likhethwa abanye kungaphefumuli ekhethekile ePhalamende.
On umbuzo yini lihlukile ePhalamende republic kamongameli, ukuqonda akunzima kangako. Manje kubalulekile ukukhuluma mayelana amaphuzu ayinhloko abakhona ezingeni eliphakeme kakhudlwana sengathi ifomu lobumengameli kahulumeni. Kuwufanele ukugqamisa amaphuzu letibalulekile letilandzelako:
isikhundla inhloko yezwe elikhona emazweni efana naleyo, futhi uhlobo oluhlukile;
lapho kokubili kumadivayisi usebenza ePhalamende, futhi kwakhiwa it is ivoti ethandwa;
Kuzo zombili lezi zimo, iPhalamende elakha uhulumeni, siqala ngezindlela ukuhluka.
Kufanele kuphawulwe ukuthi kukhona uhlobo lwesithathu lohulumeni: okubizwa ngokuthi uhlelo lulwimi kamongameli.
A iyisibonelo esihle polity ezinjalo kungabonakala nasemkhakheni France noma Russia. idivayisi ezinjalo cishe kuyinto uhlobo ephumelelayo kunazo lokulawula: ubizwa ngokuthi "segolide kusho." Amandla okunamandla yombuso is kuhlangene eliphezulu ukulawula ePhalamende. Kukhona isimiso lokho okubizwa ngomlobokazi engozini double, okuvumela ukuqaliswa kahle kakhulu kahle kwemandla embuso.
I-Counterintelligence ... Ubuhlakani bokulwa kwezempi. Kunokuba ukuhlakanipha kuhluke ku-counterintelligence
Regulatory - isenzo zomthetho: umqondo, izinhlobo kanye imininingwane
I-Numerologist World of People
"I Ugxilile Tin Soldier": isifinyezo umsebenzi. Vicissitudes ikusasa lomuntu